FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA MPIANDRY ONDRY TALOHA SY SARY - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika mpiandry ondry taloha sy sary
Fahavaratra ilay mpiandry ondry anglisy taloha miaraka amin'ny palitaony vita fohy
Lisitry ny alika mpiandry ondry anglisy taloha
Alika mpiandry anglisy taloha
Ny Old English Sheepdog dia alika mahery, matevina, toradroa. Ny topline dia ambany amin'ny soroka, mitongilana avo kokoa mankany amin'ny faran'ny lamosina. Lalina sy malalaka ny tratra. Ny loha dia lehibe miaraka amin'ny fijanonana voafaritra tsara. Mainty ny orona. Mihaona ny nify amin'ny haavon'ny haavo na hety. Ny maso dia miloko volontany, manga na iray amin'ny loko tsirairay. Ny sofina salantsalany dia entina misosa mankamin'ny loha. Ny tongotra eo aloha dia mahitsy ary ny tongony aoriana dia boribory sy hozatra. Manondro mahitsy ny tongotra kely ary boribory ny rantsantongony voahidy tsara. Ny Sheepdog anglisy taloha dia teraka tsy manan-tombo (araky ny anarana hoe Bobtail) na tapaka tanteraka. Fanamarihana: tsy ara-dalàna ny manisy rambony amin'ny ankamaroan'ny faritra any Eropa. Ny palitao marevaka sy matevina dia lava ary be dia be miaraka amin'ny akanjo ivelany tsara sy mafy ary matevina ary akanjo malefaka tsy misy rano. Ny loko palitao dia misy volondavenona, grizzle, manga, volondavenona manga, manga manga, volondavenona misy marika fotsy na fotsy misy marika fotsy.
Ny Old English Sheepdog dia milamina sy sambatra. Izy io dia afaka manova tena mora foana amin'ny toe-javatra samihafa, tia sy sariaka. Tsy mivadika, miaro ary mahira-tsaina, mahatonga namana tsara ho an'ny fianakaviana izany. Sariaka sy malefaka, ity karazany ity dia tia ary tsara amin'ny ankizy ary anisan'ny fianakaviana tokoa. Manana matanjaka izy ireo fiambenana ary mety manandrana miompy amin'ny olona amin'ny fipoahana, tsy fanorohana ary mila ampianarina tsy amin'ny andian'olombelona. Tompony malemy fanahy na mandalo na ireo izay tsy mahavita ny mazava ny fitsipika ao an-trano amin'ny fomba iray ny alika afaka mahatakatra dia hahatonga ny alika ho be finiavana. Mila an'io karazana io hentitra, nefa milamina , matoky tena ary fitarihana tsy miova . Ny Old English Sheepdog dia mpiasa tena mahay ary mahay manaraka baiko, fa tsy hiraharaha ny torolalana raha heveriny fa mahery saina noho ny mpikambana ao aminy fonosana. Ny hoditry ny Sheepdog anglisy taloha dia toa lakolosy vaky. Ity karazana ity dia mijanona ho toy ny alika alika mandritra ny taona maro, ary matetika ny taona no mamely azy tampoka.
sary mifangaro laboratoara rhodesianina ridgeback
Haavony: Lehilahy 22 - 24 santimetatra (56 - 61 cm) Vehivavy 20 - 22 santimetatra (51 cm)
Milanja: Lahy avy 65 kilao (29 kg) Vehivavy avy amin'ny 60 kilao (27 kg)
Ny sasany afaka mitombo 45 kilao mahery
Mora voan'ny IMHA (Immune Mediated Hemolytic Anemia), dysplasia hip ary katarakta. Ny alika mpiandry sasany dia mitondra ny tsimokaretina MDR1 izay mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny zava-mahadomelina sasany izay tsy maninona raha manome alika hafa, fa raha voasedra tsara ho an'ity fototarazo ity dia mety hahafaty azy ireo.
Ny Old English Sheepdog dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara. Ireo alika ireo dia mavitrika ao an-trano ary hanao izay tsara indrindra farafahakeliny tokotany mitovy habe aminy.
Ireo alika ireo dia novolavolaina ho an'ny asa mafy ary tia hazakazaka tsara. Mila entina a mandeha isan'andro , jogging na mihazakazaka. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy atao amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
Jack Russell miara terrier
Ny palitao lava sy lava volo dia mila fikolokoloana tsy tapaka mba hitazomana azy ho tsara. Raha tsy kosikina sy borosina hatrany amin'ny pataloha matevina sy matevina intelo farafahakeliny isan-kerinandro izy, dia ho lasa mason-koditra ary mety hiteraka olana amin'ny hoditra ilay alika, ka mahatonga azy ho mora mandray parasy. Alefaso tsara izay mikorontana mba tsy hitsoaka ny hoditra. Ny latabatra fikotranana dia hanamora ny asa manontolo. Raha tsy aseho ilay alika, ny palitao dia azo esorina amin'ny milina isaky ny roa volana na roa, manodidina ny iray santimetatra eo ho eo. Tamin'ny alika taloha, ireto alika ireto dia voaharatra niaraka tamin'ny ondry. Hetezo manodidina ny masonao sy ny vodilaharana miaraka amin'ny hety matevina. Ity karazana ity dia miraraka toy ny an'ny olombelona - tsy dia betsaka, fa amin'ny kely.
Misy teoria vitsivitsy momba ny niandohan'ny Sheepdog anglisy taloha. Ny iray dia mifandraika amin'ny Poodle ary ny Deerhound . Ny teôria hafa dia misy ifandraisany amin'ny Briard ary ny Bergamasco , na avy any Scotch Bearded Collies ary ny Rosiana Owtchar, karazana Rosiana volom-borona nentina tany Great Britain tamin'ny sambo avy any Baltic. Ny Old English Sheepdog dia novolavolain'ny tantsaha andrefan'i Angletera tamin'ny tantsaha izay mila mpiandry ondry haingana sy mpamaky omby tsara hitondra ny biby any an-tsena. Ny alika dia nanjary be mpampiasa amin'ny faritra fambolena. Ny tantsaha dia nanomboka ny famafazana ny rambony tamin'ny taonjato faha-18 ho fomba iray hahafantarana ireo alika izay niasa tamin'ny asa mba hahazoan'izy ireo hetra. Noho izany antony izany dia nomena anaram-bosotra 'Bobtail' ireo alika ireo. Isaky ny lohataona, rehefa voaharatra ny ondry, dia manety ny akanjon'alika koa ny tantsaha mba hanaovana akanjo mafana sy lamba firakotra. Ny Old English Sheepdog dia nampiasaina ho an'ny fiompiana reindeer satria mahazaka tsara ny toetr'andro mangatsiaka. Ity dia naseho voalohany tany Angletera tamin'ny 1873 ary ny AKC tamin'ny taona 1888. Ny talenta sasany ao amin'ny Old English Sheepdog dia ahitana: retrieving, herding and watchdog.
'Toby dia Sheepdog anglisy taloha, aseho eto amin'ny 9.5 taona eo ho eo. Tena manan-tsaina izy, marani-tsaina ary mpankato. Izy no fitiavan'ny fiainako. Eto amin'ity sary ity dia manana volo feno i Toby. '
'Ity i Toby miaraka am-bolo fohy noho ny fotoam-pialan-tsasatra any Union Pier, MI.'
Sir Winston Maxwell faha-7 ity. Teraka: 1 Mey 1997. Hijery sary misimisy kokoa an'i Max sy Abby rahavaviny!
Sary natolotry ny Carole's Old English Sheepdogs
'Ity no Sheepdog Selina anglisy taloha. Ny sary dia nalaina tao amin'ny fiompiana sakaizan'ny sakaiza iray rehefa namidy 9 volana izy, izay 'nanandraman'i' Selina hamahana osy. Tovovavy adala izy, ary manana hafainganam-pandeha roa, matory sy mitsoka! Mitsikitsiky foana izy ary sakaizan'ny rehetra. Tiany tanteraka ny rano, sotroiny, apetany ao ny tongony, milomano ao anatiny ary misotro rehefa milomano. Manao mailaka miaraka aminy aho ary anisan'ny zavatra tiany hatao izany. Manana Border Collie koa aho, ary miantso azy hoe alika, ary Selina orsa lehibe ko. Mijery an'i Cesar Millan aho manana ny vanim-potoana voalohany amin'ny DVD ary efa namaky ny bokiny voalohany. Nampianatra ahy ho mpitarika entana izy. Nampiasako ny teknikan'izy ireo mba hitaizana ny alika voalohany, ary i Selina koa. Izaho no mpitarika entana ary fantatro fa izany no mahatonga ny alikako ho k-9 tsaratsara kokoa. '
Selina the Old English Sheepdog amin'ny maha alika alika azy 9 taona
'Ity no Sheepdog anglisy taloha (Bobtail) nantsoina hoe Barry, tokony ho 5 taona teo ho eo. Izy no alika hendry indrindra sy manan-tsaina indrindra eran-tany. Mandany fotoana betsaka araka izay azoko atao amin'ny sakaizako aho. Tiany ny mandeha mitaingina fiara ary mandeha miaraka amiko . Barry dia tena manokana amin'ny fiainako ary tiako izy amin'ny foko rehetra. '
Sheepdog anglisy taloha (bobtail) nantsoina hoe Barry tokony ho 5 taona nandeha nandeha fiara
Hijery ohatra hafa momba ny Sheepdog anglisy taloha
Sary hebreo taloha taloha 1
Mpiandry Ondry anglisy taloha sary 2
Mpiandry ondry anglisy taloha sary 3
Alika Sheepdog anglisy taloha: Sarivongana Vintage azo angonina
amerikana bulldog afangaro dane be
taona iray anglisy bulldog
pomeranian Weiner alika Mix amidy